၁၁၊ ၁၊ ၂၀၂၁။ ရနျကုနျ။ ရနျကုနျတိုငျးပါတီကျောမတီဖှဲ့စညျးရေး ညှိနှိုငျးအစညျးအဝေးကို ၂၀၂၁ ဇနျန၀ါရီ ၁၁ ရကျ နလေ့ညျ ၁း၀၀ နာရီတှငျ ဗိုလျတထောငျမွို့နယျရုံး၌ ပွုလုပျခဲ့ပါသညျ။ အဆိုပါအစညျးအဝေးတှငျ ဒျေါနှငျးနှငျးမှေး (တှဲဖကျအထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ၁)၊ ဦးငှလေငျး (ဗဟိုအလုပျအမှုဆောငျကျောမတီဝငျ)နှငျ့ ရနျကုနျတိုငျးအတှငျးရှိ မွို့နယျမြားမှ ခေါငျးဆောငျမြား တကျရောကျဆှေးနှေးညှိနှိုငျးခဲ့ကွသညျ။ ယငျး ညှိနှိုငျးအစညျးအဝေးတှငျ ပါတီ တှဲဖကျအထှထှေအေတှငျးရေးမှူး(၁) ဒျေါနှငျးနှငျးမှေးက ဗဟိုကျောမတီအစညျးအဝေး၏ ရနျကုနျတိုငျးနှငျ့ ပတျသကျ၍ စဉျးစားခကျြမြား၊ ရညျမှနျးခကျြမြားနှငျ့ တာဝနျပေးအပျမှုမြားကို မိတျဆကျတငျပွခဲ့ပါသညျ။ ရနျကုနျတိုငျးတာဝနျခံ ဦးငှလေငျးက ခိုငျမာအားကောငျးသညျ့ ရနျကုနျတိုငျးပါတီကျောမတီ တညျဆောကျသှားရေးအတှကျ စဉျးစားထားခကျြ(မူကွမျး)ကို မိတျဆကျတငျပွခဲ့ပွီး အစညျးအဝေးတကျရောကျလာသူ ရဲဘျောမြားက ...
DPNS ဗဟိုကျောမတီ အစညျးအဝေး၃၀ – ၃၁၊ဒီဇငျဘာ၊၂၀၂၀။ ရနျကုနျ လူ့ဘောငျသဈဒီမိုကရကျတဈပါတီ ဗဟိုကျောမတီအစညျးအဝေးကို ၂၀၂၀၊ ဒီဇငျဘာလ ၃၀ နှငျ့ ၃၁ ရကျနတေို့တှငျ ပါတီဌာနခြုပျရုံး၌ ကငျြးပခဲ့ပါသညျ။ အစညျးအဝေး ပထမနတှေ့ငျ ပါတီဥက်ကဋ်ဌ ဦးအောငျမိုးဇျောက အဖှငျ့အမှာစကား ပွောကွားရာ၌ ပါတီတညျဆောကျရေးကို ပိုမိုအားစိုကျ ဆောငျရှကျကွရနျနှငျ့ လကျရှိနိုငျငံရေးအခွအေနတေို့ကို သုံးသပျပွောကွားခဲ့သညျ။ ထို့နောကျ ဗဟိုအလုပျအမှုဆောငျကျောမတီ၏ နိုငျငံရေးအစီရငျခံစာ၊ အတှငျးရေးမှူးအဖှဲ့၏ အလုပျပွီးစီးမှု အစီရငျခံစာ၊ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲဖွတျသနျးမှုဆိုငျရာ ခွုံငုံသုံးသပျခကျြ၊ ရေးရာကျောမတီမြားနှငျ့ ဒသေဆိုငျရာကျောမတီမြား အစရှိသညျ့ ကျောမတီအသီးသီး၏ အစီရငျခံစာမြားကို တငျသှငျးခဲ့ကွသညျ။ ဗဟိုကျောမတီဝငျမြားက အစီရငျခံစာမြားကို ဝဖေနျသုံးသပျ အကွံပွုဆှေးနှေးခဲ့ကွပါသညျ။အစညျးအဝေး ...
The latest Myanmar election resulted inalandslide victory to NLD and Aung San Suu Kyi. The two political parties partnering with the Danish Social Democrats also saw encouraging results. This is likely due toamore clearly defined ideology. The Danish Social Democratic Party (SDP) ...
First Music NEWS ဂျာနယ်နှင့်လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးဇော် အင်တာဗျူး
အဖွဲ့ချုပ်ကို ပြည်သူကထောက်ခံထားတာ၊ တပ်မတော်က ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကို အလေးအနက်ထားရမယ်၊ ပြည်သူလူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ အမိန့်တွေကို နာခံရမှာ လက်ရှိလူထုအစိုးရပေါ်မှာ တပ်မတော်အနေနဲ့ ဘယ်လောက်အထိ သစ္စာခံလဲ၊ မခံလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ အစိုးရဲ့ အောင်မြင်ခြင်း၊ မအောင်မြင်ခြင်းက မူတည်နေတယ်ဟု ဦးအောင်မိုးဇော်ဆို
၂၀၁၆၊ စက်တင်ဘာလထုတ် ခေတ်ရနံ့မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးဇော် အင်တာဗျူး
၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင် မှုတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်။ အဲဒီအပေါ် ဦးအောင်မိုးဇော်ရဲ့ အမြင်သဘောထား သိချင်ပါတယ်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ များများစားစား ပြော စရာမရှိပါဘူး။ ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံဆိုတာ အရင်အစိုးရ လက်ထက်ကစခဲ့တဲ့ NCA စာချုပ်အပေါ်မူတည်ပြီး လုပ်ခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံရဲ့ အဆက်လို့ နားလည်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရသစ်အနေနဲ့ လုပ်စရာ အလုပ်တွေ အများ ကြီးထဲက ဒီအလုပ်ကို အချိန်အကန့်အသတ်တွေကြား က ပြင်ရဆင် ရတာဖြစ်ပုံရတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ၊ သဘော တူညီထားတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ပါဝင်သင့်ပါဝင် ထိုက်သူတွေ စုံနိုင်သမျှစုံအောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရပုံပေါ် တယ်။ နောက် တစ်ချက်က အရင်စီစဉ်ခဲ့တဲ့ ...
ယနေ့ကာလသည် အင်အားစုအားလုံးပါဝင်ပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာနိုင်သည့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ သို့မဟုတ် ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ ကျင်းပနိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေကြသည့် ကာလ ဖြစ်သည်ဟု မိမိတို့ပါတီက နားလည်ပါ သည်။ ကျင်းပပြုလုပ်ကြမည့်ညီလာခံသည် ညီလာခံအဂါင်္ရပ်များနှင့် ပြည့်စုံမှုရှိ မရှိ၊ လွတ်လပ်မှုနှင့်တန်းတူရည်တူ ရှိ မရှိ၊ ပွင့်လင်း မြင်သာမှုနှင့်ရိုးဖြောင့်တည်ကြည်မှု ရှိ မရှိ ၊ ဆွေးနွေးဖက်အသီးသီးက အမြော်အမြင်ကြီးမှု ရှိ မရှိ စသည့်အချက်များအပေါ် မူတည်ပြီး ညီလာခံ၏ ရရှိချက်များသည်လည်း ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်ဟု ပါတီက ယူဆပါသည်။ အကယ်၍ ညီလာခံရရှိချက်က ကောင်းခဲ့ပါက မိမိတို့ ပြည်သူတရပ်လုံးမျှော်လင့်နေကြသည့် အရှည်တည်တန့်ခိုင်မြဲသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလည်း တည်ဆောက်နိုင်မည် ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားတန်းတူမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကို အပြည့်အ၀အာမခံသည့် ဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုလည်း တည်ဆောက် သွားနိုင်လိမ့်မည် ...
သမ္မတဦးထင်ကျော်လက်ထက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေအားဧရာဝတီသတင်းဌာနတွင် ဆွေးနွေးခန်း
လူ့ဘောငျသဈဒီမိုကရကျတဈပါတီ ဗဟိုကျောမတီအစညျးအဝေး ၁-၂၀၂၀ December 31, 2020
ဖဲကွိုးဖွူလှုပျရှားမှု နိုဝငျဘာ၊ ၃၀၊ ၂၀၂၀။ November 30, 2020
ဖဲကွိုးဖွူလှုပျရှားမှုဒီဇငျဘာ ၈၊ ၂၀၂၀။ December 8, 0202
အာဏာမသိမျးဟု မှတျယူမရကွောငျး ပွောကွားမှုအပျေါ နိုငျငံရေးသမားနှငျ့ နိုငျငံရေးလလေ့ာသူမြား၏ တုံ့ပွနျခကျြ January 28, 2021
အမြိုးသားညီညှတျရေးအပျေါသဘောထား January 16, 2021
ရနျကုနျတိုငျး ပါတီကျောမတီ ဖှဲ့စညျးရေး ညှိနှိုငျးအစညျးအဝေး January 12, 2021
ဖဲကွိုးဖွူလှုပျရှားမှု ဒုတိယနနေို့ဝငျဘာ၊ ၂၆၊ ၂၀၂၀။ January 11, 2021
Call for social welfare policies proves significant in Myanmar elections December 17, 2020
ဗဟိုအလုပျအမှုဆောငျကျောမတီအစညျးအ‌ဝေး (၆/၂၀၂၀) December 11, 2020
ပထမကြောငျးသားသပိတျလှုပျရှားမှုနှဈ (၁၀၀) ပွညျ့ အထိမျးအမှတျစကားဝိုငျး” December 9, 2020
ဖဲကွိုးဖွူလှုပျရှားမှု အမြိုးသမီးမြားအပျေါ အကွမျးဖကျမှု ပပြောကျရေး (၁၆)ရကျတာ လှုပျရှားမှု၎၊ ဒီဇငျဘာ၊ ၂၀၂၀။ December 4, 2020
ဖဲကွိုးဖွူလှုပျရှားမှု ဒီဇငျဘာ ၃၊ ၂၀၂၀။ December 3, 2020